यसरी चम्काउनुहोस् अनुहार , धाउनु पर्दैन पार्लर - Sabal Post
यसरी चम्काउनुहोस् अनुहार , धाउनु पर्दैन पार्लर
१६ असार २०७६, सोमबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
एजेन्सी – गर्मी मौसममा छालाको हेरचाह गर्न निकै कठिन हुन्छ । चर्को घाम र पसिनाका कारण छालामा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्छन् ।त्यतिमात्र होइन धुवा धुलो र प्रदुषणले छालाका साथै अनुहारको निखारता पनि हराउन सक्छ । छालाको हेरचाह राम्रोसँग गरिएन भने अनुहार फुस्रो हुने, चाया पोतो आउने लगायतका समस्या पर्न सकछन् । त्यसैले छालाको हेरचाहमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
आजभोलि अनुहार राम्रो बनाउनका लागि पार्लर जाने वा कस्मेटिक उपचार गर्ने प्रचलनमा विकास भएको छ तर त्यसले अनुहारको प्राकृतिक सुन्दरतालाई फिर्ता गर्दैन । त्यसका लागि तपाईले घरमा नै केही उपायहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागि निकै उपयोगी हुन्छ, दही । दहीका साथमा नीमको प्रयोग थप उपयोगी हुनजान्छ ।
कसरी बनाउने फेसप्याक ? दही र नीमको फेसप्याक बनाउन सजिलो छ । केही नीमको पात र दही भएमा यस्तो प्याक बनाउन सकिन्छ ।त्यसका लागि केही नीमका पत्ताहरुलाई मिक्सरमा हाल्नुपर्छ । यसमा दुई टेबल चम्चा दही हाल्ने र त्यसलाई राम्ररी मिक्स गर्ने । अब यो पेस्टलाई आफ्नो स्किनमा लगाउने र १५ मिनेटपछि सफा पानीले पखाल्नुपर्छ ।
के फाइदा ? अनुहारमा निखार ल्याउन सहयोगीः यो फेस प्याक भिटामिन्स र पोषक तत्वहरुले भरपूर हुन्छ । यसले हाम्रो स्किन सेल्सलाई स्वस्थ राख्छ र यसले हाम्रो अनुहारमा चमक ल्याउँछ । दाग धब्बालाई कम गर्छः यो प्याकले खराब टिस्यूहरुलाई रिपेयर गर्छ । यसलाई दैनिक लगाउनाले अनुहारको दाग(धब्बा कम भएर जान्छ । घामबाट अनुहारको रक्षाः नीम र दहीको मिश्रणले सनस्कीनको रुपमा पनि काम गर्छ । यसले हाम्रो स्किनलाई खतरनाक यूभी किरणबाट बचाउँछ ।
नीममा एन्टी ब्याक्टेरिया हुने भएकाले यसले खटिरा, डन्डीफोरबाला ब्याक्टेरियालाई मार्छ । स्किन टोनलाई सेतो बनाउँछः यसले ब्लीचिङ एजेन्टको रुपमा पनि काम गर्छ । यसले तपाईंको स्किन टोन सेतो हुन्छ । छालाको रोगहरु पर भगाउँछः दही र नीमको पेस्टले सानातिना छालाका बिमारीहरुलाई ठिक पार्छ । छालालाई नरम बनाउँछः दहीले छालामा मोइस्चराइजरको रुपमा काम गर्छ र छालालाई मुलायम बनाउँछ ।
देशभरका कार्यालयमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने नेकपाकाे…
किन हुन्छ डिभोर्स ?
कांग्रेसले आफ्नै साथी फसाउँछ, एमालेले असंख्य अपराध…
तिहारमा २५ लाख मालाको माग, ६० प्रतिशत…
ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्ने तयारीमा लोकसेवा आयोग
के छ विष्णु पुराण अध्यायमा
पुरुषको जीवमा यी लक्षण भएका स्त्रीसंग विवाह गर्दा भाग्य चम्कने
व्रत बस्नुका के के छन् फाइदा
आफै कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाएर कांग्रेसलाई आरोपीत गर्ने विषय गम्भीर छ…
कांग्रेस नेता भण्डारीद्वारा कुवेतमा रहेकी सुत्केरी महिलालाई ५० हजार आर्थिक…
भारतले नेपाल र चीनसँग परिस्थिति बिगारिरहेको पाकीस्तानका प्रमको दाबी
नेपाल मेडिकल कलेजका २ डाक्टर माथी कुटपीट
कांग्रेस प्रवक्ताले भने – प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा…
कोरोना भाईरसवाट निको भएर घर फर्कीए १८३ नेपाली
एनआरएनए अमेरिकाको नवौँ साधारण सभा डिजिटल अनलाईन हुने ।